Guddiga Doorashooyinka Jubbaland oo maanta lasoo xulay xilli ay diideen in dib loo dhigo Doorashada(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Guddoonka Baarlamaanka Jubbaland, ayaa si rasmi ah u diiday in dib loo dhigo Doorashada Madaxweynaha Jubbaland, oo lagu wado in 15-ka bisha August ka qabsoomto Magaalada Kismaayo.
Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo weli xilka Madaxweynaha ku magacaaban, ayaa waxa uu Baarlamaanka uu ka codsaday in dib loo dhigo Doorashada Madaxtinimada, si loogu diyaargarowbo Doorashada.
Cabdi Maxamed C/raxmaan, Gudoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland oo Saxaafadda la hadlay, ayaa Madaxweynaha ku gacansayray dib u dhigis lagu sameeyo Doorashada Madaxtinimada.
Gudoomiyaha, ayaa tibaaxay in Doorashada Madaxweynaha ay qabsoomi doonto 15-ka August, oo uu ku sheegay xilliga loo muddeeyay inay dhacdo Doorashada, sida uu yiri.
Dhanka kale Gudoomiyaha waxa uu maanta ku dhawaaqay sagaal xubnood oo uu ku sheegay inay yihiin Guddiga Doorashada Madaxweynaha Jubbaland, si ay u soo diyaariyan qaban qaabada Doorashada.
Xubnahan, ayaa waxaa laga soo dhex xulay Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland. Sideed ka mid ihi waa rag, halka midda kalana ay dumar tahay.
waxayna kalayihiin sidatan:-
1. Xabiibo Max’ed Cabdulle Guddoomiye
2. Axmed Cabdixafiid Maxamed Guddoomiye ku xigeen
3. Xuseen Xirsi Axmed Xoghayn
4. Cabdi Maxamed Cabdi Xubin
5. Cismaan Xuseen Rooble Xubin
6. Bashiir Axmed Cumar Xubin
7. Xasan Xaaji Maxamuud Xubin
8. Axmed Ismaaciil Xubin
9. Cabbaas Cali Ibraahim Xubin –
Dad badan, ayaa shaki gelinaaya sida ay Doorasho xalaal ah kaga qabsoomi karto Magaalada Kismaayo, haddii la soo gaabiyay xilligii ay qabsoomi laheyd Doorashada Madaxtinimada Jubbaland.
Tacadiyada Ciidamada AMISOM Kageestaan Marka waa laxisabtan la aan Dawlada